साप्ताहिक राशिफल : यी ८ राशिका लागि अति शुभ, अन्यका लागि कस्तो छ ? - Naya Pusta
साप्ताहिक राशिफल : यी ८ राशिका लागि अति शुभ, अन्यका लागि कस्तो छ ?
✍️ नयाँ पुस्ता	 २०७५ चैत्र ३ १७:४० 4
अग्रजहरूबाट नयाँ कार्य सुरुवात गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ । नयाँ मित्रको आगमन तथा सहयोगले मन प्रफुल्लित हुनेछ । बोलीको प्रभावका कारण अधुरा कार्य पूरा हुनेछन् । आफन्तजनले तपाईंको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै प्रशंसा गर्नेछन् । सवारी साधन खरिद गर्ने साइत जुर्न सक्छ ।
आफन्तहरूले आफ्नो सहयोगी भावनाको उचित मूल्यांकन गर्ने छैनन् । विनाकारण तपाईंको आलोचना हुनसक्छ । अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रक्रिया अघि बढाए सन्तोषजनक परिणम प्राप्त हुनेछ । रातो रंगको पहिरनले मनोकांक्षा पूरा गर्न सहज बनाउनेछ ।
लामो समयपछि विचार मिल्ने साथीहरूसँग भलाकुसारी गर्दै मनोरञ्जन गर्न पाइनेछ । व्यवस्थित दिनचर्याले शारीरिक ऊर्जा प्राप्त भै काम थप सफलता हात पर्नेछ । खानपानको व्यवस्थापन नमिल्दा स्वास्थमा गडबडी देखा पर्न सक्छ । हरियो रंगको सवारी साधनले विशेष फाइदा पुर्‍याउनेछ ।
योग अभ्यास एवं ध्यान गर्न सके मानसिक आलस्यता तथा तनाव स्वतः निर्मूल भै ऊर्जावान भइनेछ । सरकारी कर्मचारीको पदस्थापना नयाँ स्थानमा हुनसक्छ । होस नपुर्‍याइ निर्णय गर्दा मर्यादामा चोट पुग्ला, हेक्का राख्नुहोला ।
कम लगानीको व्यवसायबाटै राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकिनेछ । अनुभवीहरूको सुझाव अवलम्बन गर्न सके थप नोक्सानीबाट जोगिन सकिनेछ । पूर्व परिचित साथीहरूबाट मन पराएको प्रस्ताव प्राप्त हुनसक्छ, सचेत भै निर्णय गर्नुहोला । साताको अन्त्यमा मनोरञ्जन सहितको भ्रमणमा सहभागी हुन पाइन्छ ।
प्रेमी–प्रेमिकासित नौलो स्थानको भ्रमण गर्ने साइत जुर्न सक्छ जसले आफूभित्रको निराशालाई उत्साहमा परिणत गर्नेछ । स्वास्थसम्बन्धी सामान्य गडबडी देखा परे पनि मंगलबार पछि समस्या स्वतः निराकरण हुनेछ । अपेक्षा गरे जस्तो उपलब्धि हात पार्न केही समय कुर्नु पर्नेछ।
प्रतिस्पर्धीहरूले उछिनेर विशेष अवसर फुत्काउन सक्छन्, सचेत रहनुहोला । अरूलाई छिटो विश्वास गर्दा अप्ठ्यारोमा परिएला । गुरुजन तथा अभिभावकको प्रेरणाले मन दह्रो हुनेछ भने अध्ययनमा हौसला मिल्नेछ । समाजसेवाप्रति आकर्षित भै व्यक्तिगत पहिचानसमेत बनाउन सकिनेछ । यात्रा गर्दा समयको ख्याल राख्नुहोला ।
पुराना कामबाट प्राप्त अनुभवले नयाँ योजना बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । साझेदारीमा गरिएको कामले लाभ प्रदान गर्नेछ । आफूले मन पराएको साथीको भावनाको कदर गर्नु होला । आर्थिक भार बढेर जानेछ । सुनौलो रंगलाई पछ्याउँदा काम द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न सकिनेछ।
शनिदेवको प्रभावले व्यवसायमा उतारचढाब सिर्जना गर्न सक्छ । सूर्यदेवको आरधना गर्न सके सहजता महसुस हुनेछ । विदेश यात्राको अवसर समेत प्राप्त होला । विद्यार्थी वर्गले अध्ययनमा जोड दिनुपर्नेछ । साताको अन्त्यमा साथीहरूको सुझाव अनुरुप चल्दा खर्चको मात्रा बढ्नेछ ।
व्यापारका सिलसिलामा लामो यात्रा हुने सम्भावना छ । ठूला व्यवसायीहरूसँग उठबस हुँदा कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्नु पर्नेछ । मन पराउने साथीले घुमाउरो भाषामा प्रेम प्रस्ताव राख्न सक्छन्, भावना बुझ्ने चेष्टा गर्नु होला । साताको अन्त्यमा शारीरिक थकानले सताउन सक्छ ।
करियर बनाउन अहोरात्र मेहनत गर्नु पर्नेछ । परोपकारी कार्यप्रति रुचि बढ्नेछ । असहज परिस्थतिबाट उम्कन बढी समय खर्चनु पर्नेछ । कुनै समस्या आइलाग्दा अग्रजहरूको सुझावमार्फत त्यसको निराकरण गर्न सकिनेछ । मौसमी फेरबदलले स्वास्थ प्रतिकूल बनाउन सक्छ ।
साथीहरूको सुझाव अनुरूप अघि बढिनेछ । आफूसँग भएको क्षमता प्रदर्शन गर्दा विश्वासपात्रहरूको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्नु होला । अभिभावकहरूले व्यवहारिक जिम्मेवारी प्रदान गर्नेछन् । ठूला खालका आर्थिक कारोबार नगर्दा नै सुरक्षित भइनेछ । प्रतिष्ठित व्यक्तिको सहयोग प्राप्त भै झिनामसिना समस्याको गाँठो फुक्नेछ।
घरको यो दिशामा बाल्नुहोस् दियो, सुख र शान्ति छाउनेछ !
निर्वाचन जित्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बनाए मध्यरातमा यस्तो रणनीति